Ticksy: Dị Mfe, SaaS Nkwado Ndị Ahịa | Martech Zone
Ticksy: Dị Mfe, SaaS Nkwado Ndị Ahịa
Sọnde, Septemba 30, 2012 Thursday, June 18, 2015 Douglas Karr
N'ajụjụ ọnụ anyị naMpempe akwụkwọ on Friday, anyị na-dị nnọọ na-ekwu okwu banyere otú oké ngwa-anọgide na-kụrụ ahịa na-enye ego ngwọta na ike na-eto eto na azụmahịa gị. Ka m na-ede onye nrụpụta na nsogbu anyị na-enwe na ngwa mgbakwunye ya, m banyere n'ime sistemu tiketi ndị ha mejuputara, Nri.
Ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa na-eto eto, nke a nwere ike ịbụ sistemụ zuru oke maka gị ebe ọ bụ na ha na-akwụ $ 5 naanị onye ọrụ ọ bụla. Ka ọ dị ugbu a, a jikọtara usoro ahụ na Envato, ezinụlọ nke ngwa mgbakwunye weebụ, isiokwu na saịtị snippet, ka ndị mmepe wee nwee ike inye ndị ahịa ha nkwado. O nwere atụmatụ niile achọrọ maka obere ụlọ ahịa mmepe - yana ihe na-edochi ndozi ahụhụ, Ajụjụ na ihe ọmụma, ntọala email na nzaghachi, yana ịkwado tiketi.
Ticksy na-akwalite uru ndị a:
Dịka - Ticksy na-ahapụ gị ịhọrọ subdomain ma hazie akara ngosi gị ka ọ daba na akara gị maka ahụmịhe ndị ahịa na-enweghị ntụpọ.
Envato-enyi na enyi - A na-eme Ticksy ka ọ dị mfe ijikọ na Envato, na-eme ka ọ dị mfe iji kwado ma nyochaa ịzụrụ site na Day One.
Oge na-azoputa - Ticksy si ọcha imewe na interface na-eme ka nkwado usoro dị mfe ma kensinammuo gị na - ihe ndị ọzọ - gị ahịa.
Enweghi onwe - Lekwasị anya n’ịkwado ndị ahịa gị, ọ bụghị ijikwa ngwa. Ticksy na-enye nkwado ngwaọrụ ịchọrọ n'ezie. Enweghị bloatware.
Ọnụ ọnụ - Naanị $ 5 kwa onye ọrụ kwa ọnwa - ọ nweghịkwa ego zoro ezo - Ticksy na-enyere gị aka ịnye nkwado ndị ahịa mara mma maka ọnụ ahịa otu filla vanilla latte nwere mgbatị ọzọ.
Leegba efe - Ticksy dị mfe, kensinammuo dashboard na-enye gị ngwaọrụ iji nọrọ na-ahazi, mbanye arụmọrụ na-enye top-ụgbọ elu ahịa ọrụ.
Tags: azịza nchekwa dataNdị ọrụ nlekọta ndị ahịaahịa nkwadoFAQihe ọmụma nchekwa datatiketi nkwadoỊnye tiketi
Ndi Adobe SiteCatalyst na-efu Steam?